China AT Series Pneumatika Actuator mpanamboatra sy mpanamboatra | Convista
AT Series Pneumatika Actuator
Mediam-piasana: Rivotra maina na menaka manitra, ny gazy na menaka tsy manimba
2. Fanerena famatsian-drivotra: fihetsika roa: 2 ~ 8Bar; Fiverenana lohataona: 2 ~ 8Bar
3. Operation mari-pana:
Ny mari-pana ambany (Miakatra amin'ny -40 ℃)
Maripana ambony (hatramin'ny 150 ℃)
4. Fanitsiana ny dia: Manaova fanitsiana ± 4 ° ho an'ny fihodinana amin'ny 90 °
5. Lubrication: ny faritra mihetsika rehetra dia mifono diloilo, manitatra ny androm-piainany
6. Fampiharana: Na any anaty na any ivelany
7. Max Pressure pressure: latsaky ny 8Bar
1. Ireo mpikatroka pneumatika rehetra dia manasongadina ny fametrahana NAMUR hameno ny fenitra iraisampirenena ary ahafahana mametraka tsotra ny famindrana fetra, ny mpiorina ary ny kojakoja automatique hafa.
2. Ny pinion avo lenta sy integrative, vita endrika vy nickeled-firaka vy, mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra farany an'ny ISO5211, DIN3337, NAMUR, koa ny refy sy ny fitaovana azo amboarina.
3. Araka ny fepetra takiana samihafa, ny firaka alimina alefa ASTM6005 Vatana dia azo tsaboina amin'ny anodized mafy, polyester miloko vita amin'ny loko (misy loko isan-karazany toy ny manga, volomboasary, mavo sns), PTFE na Nickel nopetahany takelaka.
4. Alimina alimina maty-cast, ny tany dia azo tototry ny herin'ny metaly, PTFE na voapetaka amin'ny nickel.
5. Ny kambana pistons vita amin'ny kambana dia vita amin'ny alim-baravarankely maty voatsabo amin'ny vy anodized na vita amin'ny vy vy miaraka amina galvanisation. Ny toerana misy ny simetrika, ny fiainana tsingerina lava ary ny fandidiana haingana, ny famadihana ny fihodinana amin'ny alàlan'ny famadihana ireo piston fotsiny.
6. Ny bolt fanitsiana fijanonana ivelany tsy miankina roa dia afaka manitsy ny ± 5 ° amin'ny lalana malalaka sy akaiky ary mora sy marina.
7. Ny loharano rakotra preloaded dia natao ho fitaovana avo lenta ho fanoherana ny harafesina sy ny androm-piainana lava kokoa, izay azo oharina am-pilaminana sy am-pahamendrehana mba hanomezana fahafaham-po ireo takiana samihafa amin'ny tady amin'ny alàlan'ny fanovana loharano maro.
8. Slideways vita amin'ny fitaovana miaraka amina coefficient ny friksi kely mba hialana amin'ny metaly amin'ny vy.
Previous: DRG Series Actuator pneumatika adidy mavesatra
Manaraka: T karazana sivana
Side Entry forged Steel Trunnion nitaingina Ball V ...
Lohataona mihidy mitondra valizy azo antoka karazana feno
DRG Series Actuator pneumatika adidy mavesatra